आफैँले चलाएको गोली लागेर डोल्पामा एक सैनिक घाइते « प्रशासन
आफैँले चलाएको गोली लागेर डोल्पामा एक सैनिक घाइते
डोल्पा । डोल्पामा एकजना नेपाली सेनाका जवान आफैँले चलाएको गोली लागेर शख्त घाइते भएका छन् ।
आफैँले हानेको गोलीले उनको चिउँडो, मुख, ओठ र नाक पूरै च्यातिएको जिल्ला अस्पताल डोल्पाका मेडिकल सर्जन डा. अनुप मंगल समालले जानकारी दिए ।
डा. अनुपले एक्सिडेण्टल बुलेट केस (बन्दूकबाट भएको दूर्घटना) भएकाले बिरामीले बोल्न नसक्ने र उनको उपचार डोल्पामा हुन नसक्ने भएपछि काठमाडौं लैजान सल्लाह दिएको बताए । उनले भने “अवस्था गम्भीर छ, तर काठमाडौमा उपचार हुन्छ, बिरामीको होस् गुमेको भने छैन ।”
ड्यूटीमा रहेका जवानले एकैपटक गोली चलाएर हतियार पड्केको आवाज आएपछि मात्र अरुले थाहा पाएको सेनाले जानकारी दिएको छ । सेनाका अनुसार तत्काल जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि लगेको र थप उपचारका लागि प्रदेश केन्द्रबाट हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरी सुर्खेत र्हुदै काठमाडौं लगिएको छ ।
17 May, 2022 6:26 pm
दिप्रुङ चुइचुम्माको प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा एमाले
खोटाङ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा नेकपा
17 May, 2022 6:18 pm
बेँसीसहरमा एमाले विजयी
लमजुङ । सदरमुकामसमेत रहेको बेँसीसहर नगरपालिकामा नेकपा(एमाले)का उम्मेदवार विजयी भएका